Halagaan, lafa Oromoo, Horoon nutti gurguruuf miraga-n qabu! – Beekan Guluma Erena
Halagaan, lafa Oromoo, Horoon nutti gurguruuf miraga-n qabu! Beekan Erena
Poems November 7, 2016
41SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
Halagaan, lafa Oromoo, Horoon nutti gurguruuf miraga-n qabu! –
Wayyaanee lafa Oromoo, ilmaan hiyyeeyyii qe’ee irraa buqqisee akka fedhe saamaa ture, saamaas jira. Haaluma duraan barame gidduu kanas Magaalaa Finfinneetti bosonni Qabban’aa, Azeeb Masfiniif akka bilisaan kenname dubbatamaa jira.
Garagalcha kanaammoo mootummaan Wayyaanee ilmaan Oromootti lafuma abbaa isaanii taakkuun safaree maallaqaaan sharafata. Kanumaan walqabatee gidduu kana Magaalota Naannawaa Finfinnee Buraayyuu fi Laga Xaafoo-Laga Daadhiitti mootumnaan Wayyaanee lafa isiniif laanna qarshii kanfaladhaa jechuudhaan walgahii teessisee jira. “Yeroo jalqabaaf birr 23,000 kanfaltee. Sana booda gaafa qarshii 40,000 kanfaltanii xumurtan lafti isiniif kennama” jechuudhaan sobaan maallaqa ilmaan Oromoo irraa funaanuutti jira. Asirratti wanti ilmaan Oromoo hubachuu qaban yeroo mootummaan Wayyaanee hundeen buqqa’ee badaa jirutti lafa ilmaan hiyyeeyyii irraa fudhatame maallaqaan bitachuuf yaaluun boru gaafa mootummaan Wayyaanee bade nama gaafachiisa. Har’a ilmaan Oromoo dhiiga dhangalaasanii kan falmatan gaaffii abbaa biyyummaa Oromoo deebisuufi malee lafa ilmaan hiyyeeyyii akka inni maallaqa qabu bitatuuf miti. Lafti ummataa borus kanuma ummataati. Abbaan qe’ee boru lafa isaa ni deeffata. Kanatti dabalees, mootummaan Wayyaanee kisaaraa diinagdee keessa waan galeef lafa isiniif kennina jechuun maallaqa funaannatee akka baduu danda’us beekuun dirqama. Tari wanti ifa tahuu qabu yoo jiraate namootni tokko tokko, “Nuti dhiisnus alagaan inuma fudhata. Kanaafuu, alagaan fudhachuurra kanfallee haafudhannu” jedhu. Asirratti gowwoomuun hinbarbaachisu. Halagaan kana booda lafa Oromoo fudhachuuf sodaa guddaa keessa jira. Fudhatus humna ummataan lafti ummataa ni deebi’a. Gama biraanis, mootummaan kuni yeroo kufaa jirutti dhuguma lafa nuuf kenna jedhanii yaaduun guyyaa hirriiba malee dhaabbiitti abjootudha. Kanaafuu, ilmaan Oromoo gochaa akkasiirraa akka of qusattan. Wayyaaneen lafa Oromoo hanga humnaa ofiif tolaan qooddachuu fi ilmaan Oromoottimmoo taakkuun safaree maallaqaan sharafuuf mirga tokko hinqabu. Waliif haa daddabarsinu! Injifannoon Uummata Oromoof About Latest Posts Beekan ErenaTeaching, Writing and editing at Books Latest posts by Beekan Erena (see all)	HIDHII XUUXUUN FURMAATA HINTAATU: Baarentuu Gadaatiin: Halagaa Humnaan Nama cabse, sossobbaan Hinmo’atani!, Caamsaa, 2017 - May 22, 2017	ODUU GADDAA: OBBO BIRHAANUU BULTOO; SODDAA GOOTICHA OROMOO OBBO BAAROO TUMSAA, OBBOLEESSA GOOTICHA OROMOO JENERAL DAMISEE BULTOO BOQOTEERA! Sirni Awwaalchaa Biyya Dhalootasaa Oromiyaatti ta’a! - May 18, 2017	QABSOO BILISUMMAA AFAAN OROMOO: MALKAAMUU JAATEEtiin: Waligayii marii afaan fi aadaa Oromoo irratti barruu dhiyaate, Jarmanii, Frankfurt, Waxabajjii 11 bara 2016 - May 13, 2017	Kana Tamsaasi:TweetEmailPrint
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa41SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← FDG/FXG Waggaa 11 Guute: Warri Reefuu Hirribaa Ka’an Waggaa 1 Jedhu-Injifannoo Ummata Oromoof ! Simboo A. Danuu (Sadaasa 03, 2016)
WAGGAA 11FFAA FDG-Baarentuu Gadaa Irraa →